Khine Zar Thwe ,aCRM Consultant from B360 B2B –Focus on developing and delivering high-quality CRM technical/business solutions to diverse client base according to their unique needs.
CRM ဆိုတာ “Customer Relationship Management Software” ကို ဆိုလိုပါတယ်။
CRM Software တစ်ခုအတွင်းမှာ ကိုယ့် Business ရဲ့ Customer data တွေကိုတစုတစည်းထဲ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ CRM အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် Contacts, Deals စတဲ့ Records တွေရဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ Sales Management Insights တွေကို ရရှိနိုင်တဲ့အပြင် Social Media Platform ဖြစ်တဲ့ (Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram) စတဲ့ App တွေနဲ့လည်း ချိတ်ဆက်ပြီး သင့် Business ရဲ့ Sales Team, Marketing Team, Service Team စတဲ့ Department တွေနဲ့လည်း အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ Communication လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Software ရဲ့ အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့မတူညီတဲ့ Department တိုင်းက Customer information တွေကို အတူတကွ စုစည်းပြီး တစ်ခုတည်းသော Customer ဘက်က View ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီထုတ်ပေးတာပါ။
ဒီလိုထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် Customer တွေနဲ့အမြဲထိတွေ့နေရတဲ့ Sales and Marketing နဲ့ Customer Support တွေကို လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက် Decision တစ်ခုလျင်လျင်မြန်မြန်ချဖို့ ထောက်ပံပေးပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ Product ကို Up-Selling လုပ်မလား Cross-Selling လုပ်မလား စသည်ဖြင့် Customer တွေနဲ့ တစ်သွေးတစ်သားထဲဖြစ်နေသလို လိုအပ်တဲ့ Marketing Campaigns တွေ Promotions တွေကို လိုအပ်သလို ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လဲကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ Customer Communications ကောင်းလာတာနှင့်အမျှ ကိုယ့်ရဲ့ Product နဲ့ Customer Target တို့ အချိတ်အဆက်မိလာမှာပါ။ CRM ကို အောင်အောင်မြင်မြင် တည်ဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ Customer တစ်ယောက်ချင်းစီနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကို တိုးတတ်လာအောင်လုပ်လာနိုင်ရုံမကပဲ Customer Value တိုင်းတဲ့အခါမှာလဲ အထောက်အပံ့ ရပါလိမ့်မယ်။
CRM က Marketing Campaign တွေကို Implement လုပ်ပေးနိုင် ခြင်း Sales အရောင်းအားတက်စေရန်အတွက်လည်း ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ CRM မှ ဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အော်ဒါအမှာစာ စာရင်းများကို အထောက်အပံပေးနိုင်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
CRM Software က Customers များရဲ့ Data များကို တစုတစည်းထဲ စုစည်းရာမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ CRM မှာ Sales, Marketing and Service တွေကို တနေရာထဲမှာ အလိုအလျောက် စုစည်းပေးတဲ့ စနစ်ပါဝင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် CRM က Customerတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်ပေးနိုင်ခြင်း၊Sales Reps တစ်ဦးချင်းစီရဲ့Sales Process များကို ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် ကူညီပေးနိုင်ခြင်း တို့ကိုလည်း လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ CRM က Sales Opportunity တွေနဲ့ Data များကို သေချာစွာ Analyze လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Organization တိုင်းလိုအပ်တဲ့ CRM ရဲ့ အဓိက Features များ
Sales Reps တစ်ဦးချင်းစီရဲ့Sales Process များကို ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် ကူညီပေးနိုင်ခြင်း တို့ကိုလည်း လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ CRM က Sales Opportunity တွေနဲ့ Data များကို သေချာစွာ Analyze လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
(1) Sales Automation လုပ်ခြင်း
Sales Automation တွေကိုများသောအားဖြင့် B2B Business တွေ ဒါမှမဟုတ် Sales Cycle ရှုပ်ထွေးတဲ့ Situation တွေမှာ အသုံးများကြပါတယ်။
(2) Account Management လုပ်ခြင်း
Organization အများစုတွင် Customer တစ် ဦး သို့မဟုတ်Account တစ်ခုကအရေးကြီးတယ်။ CRM ကိုအသုံးပြုခြင်းက ကုမ္ပဏီအတွင်းမှာရှိတဲ့ Customer တစ် ဦး ချင်းစီနှင့် ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်များသိမ်းဆည်းခြင်း၊ အခြေအနေများကိုအလွယ်တကူသိနိင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Account Management က လည်း CRM ရဲ့ Core Features တစ်ခုအနေနနဲ့ပါဝင်ပါတယ်။
(3) Contact Management လုပ်ခြင်း
Contact Management ကတော့ CRM က Customers တွေ Prospects တွေရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Data အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းပေးတယ်။
(4) Quote Management လုပ်နိုင်ခြင်း
B2B Business တွေမှာ Sales Reps တွေက ကိုယ့် Customers သို့မဟုတ် Prospects တွေကို မိမိတို့ Product ရဲ့ ဈေးနှုန်း၊ Services Charges တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရပါတယ်။ CRM tool မှာတော့ရိုးရှင်းပြီးလွယ်လွယ်ကူကူ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Quotation Tools ပါဝင်တာကြောင့် Sales Reps အနေနဲ့ ကလစ်တစ်ချက် နှိပ်ရုံဖြင့် Professional ဆန်တဲ့ Sales Quotation တစ်ခုကိုအလျင်အမြန် ထုတ်နိုင်ပါသည်။ CRM ကို Product Catalog နဲ့ Integrate လုပ်ခြင်း (သို့မဟုတ် CRM အတွင်းရှိ Product Catalog Data များကိုသိမ်းဆည်းခြင်း) အားဖြင့် Sales Reps တွေက Product Catalog Quotation တွေကို Customers တွေဆီ အလွယ်တကူပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ Quotation တွေကို PDF အနေနဲ့ Attached လုပ်ပြီးတော့လည်း CRM မှတစ်ဆင့် Email တွေပို့နိုင်ပါတယ်။
(5) Sales Pipeline Management ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
CRM မှာ သင့်ရဲ့ Sales Pipeline တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ Deals တွေ Stage တစ်ခုကနေတစ်ခု အလွယ်တကူ ကူးပြောင်း နိုင်အောင်လည်းပြုလုပ်ပေးတယ်။
(6) Customer Retention
CRM Software ရဲ့ အကူအညီဖြင့် သင့်ရဲ့ Customers ဘယ်သူတွေလဲ? သူတို့စိတ်ဝင်စားတာက ဘာတွေလဲ? သူတို့ဘယ်နေရာတွေမှာ ဘယ်လိုရှိနေလဲ? အစရှိတဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Customers တွေရဲ့ အကြောင်းကို စတင်ပြီး သေသေချာချာ နားလည်နိုင်ပြီဆိုရင် Customers များနဲ့ ရေရှည်ဆက်ဆံရေးမှာ တိုးတက်မှုများစွာ ရရှိနိုင်ပြီး Loyal Customers များကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ သေချာပါတယ်။
ငွေကြေးလည်ပတ်မှု တခုတည်းကို အာရုံစိုက်နေရုံသပ်သပ်ဖြင့် Customers တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို နားလည်သိရှိနိုင်မှာ မဟုတ်တာကြောင့် အချိန်ကိုက် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Customers အသစ်တွေကို ရှာဖွေတာထက် ရှိပြီးသား Customers အဟောင်းတွေကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တာက ကုန်ကျစရိတ် ဘယ်လောက်သက်သာနိုင်တယ်၊ ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်ပိုပြီး ရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကို Data များမှ ပြသပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါဆို လုပ်ငန်းအတွက် ခက်ခဲတဲ့ လမ်းစဉ်ကို ဘာကြောင့်ရွေးချယ်နေမှာလဲ?
CRM ရဲ့အချက်အလက် အကူအညီနဲ့ Customers တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို လုံးဝနားလည်ပြီဆိုရင် ထိရောက်တဲ့ Target တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Customers လိုအပ်ချက်ကို လိုက်ပြီး အထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ၊ အထူးဝန်ဆောင်မှုများ၊ VIP များအတွက် အထူးအစီအစဉ်များ၊ တဦးချင်းအလိုက် အထူးအစီအစဉ်များ အစရှိတဲ့ အစီအစဉ်တခုစီကို ဖန်တီးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Customers များနဲ့ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အချက်အလက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ကျစ်လစ်ခိုင်မာတဲ့ Solid Customers Base ကို အောင်အောင်မြင်မြင် တည်ဆောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေကို အခြေခံပြီး Customers အသစ်များကိုလည်း ဆွဲဆောင်နိုင်မှာ သေချာပါတယ်။
CRM ကိုအသုံးချရာမှာ ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းတခုနဲ့ တခုကြား ကွာခြားချက်များရှိပေမယ့် အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ လိုအပ်နေကြောင်း လမ်းညွှန်ချက်တွေကတော့ ရှင်းလင်းတိကျနေပါတယ်။
(7) Dashboard and Analytics
Sales Leaders တွေက CRM ကိုအသုံးပြုပြီး သူတို့၏အဖွဲ့၏ Team’s Activity နှင့် Revenue တိုးတက်မှုနှုန်းကိုလည်း Track လုပ်နိုင်ပါတယ်။
CRM ကိုဘယ်သူတွေ သုံးသင့်လဲ?
CRM ကိုအသုံးပြုကြတဲ့ Company များဟာ Customer များနဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်းများ စနစ်တကျပြုပြင် တည်ဆောက်ဖို့အတွက် အသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းငယ် ထပ်ပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်မယ်ဆိုရင် Company အစုအဖွဲ့ (၂) မျိုး တွေ့ရှိရပါတယ်။
B2B (Business to Business) ကုမ္ပဏီများ (software company,arecruiting firm) အနေဖြင့် Customer များနဲ့ ရေရှည်ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းများကို ရေရှည်လက်တွဲရောင်းချခြင်း အစရှိတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ B2C (Business to Consumer) ကုမ္ပဏီများ (jeweler,alandscaping service, orarealtor) အနေဖြင့်လည်း Customer များရဲ့ လိုအပ်ချက်များနဲ့ အချက်အလက်များကို သေချာသိရှိနားလည်းပြီး ဆက်ဆံရေးကောင်းများ တည်ဆောက်ကာ ရောင်းချမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို သေချာစနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
" Make your Customer Management Process more easily with our CRM."
(1) Sales Reps များကို CRM ထဲ Invite လုပ်ခြင်း
Sales Reps တွေက CRM ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့် Customers တွေရဲ့ Data တွေကိုလည်း တစ်နေရာထဲမှာ တစ်စုတစ်စည်းထဲ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ CRM Implementation မလုပ်ခင် ပထမဦးဆုံးမှာ Users တွေကို အရင်ဆုံး Invite လုပ်သင့်ပါတယ်။
(2) CRM Setting ကို Customize လုပ်ခြင်း
CRM System က Sales Process ကို. Reflect ဖြစ်စေပါတယ်။ Sales Process ရဲ့ Stages ကိုတိကျသေချာစွာပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် Lead မှ Customer , Customer မှတစ်ဆင့် Opportunity Stage ဆိုပြီးပြောင်းလဲသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ သင်ရဲ့ Sales Process ကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုတာမသိသေးရင် ကိုယ့် Prospects တွေက Product and Service တွေကိုဘယ်လိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးဝယ်ယူလဲဆိုတာကို လေ့လာစောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
Business အများစုမှာ သူတို့ Track လုပ်လိုတဲ့ Unique Properties တွေရှိကြပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် “ Billing ID”,“ Time Zone”,“ Product purchase” သို့မဟုတ်“ Global Office Address” အတွက် တစ်ခုထပ်ထည့်မည်ဆိုပါက Existing Data တွေကို Import မလုပ်ခင်မှာကြိုတင်ပြီး လိုချင်တဲ့ Properties တွေကို Create လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင့် Businessက မတူညီတဲ့ Currency ကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုရင်တော့ CRM ထဲကနေ အသုံးပြုမယ့် Currency ကို Adjust လုပ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
(3) Contacts, Companies, and Deals များကို CRM ထဲသို့ Import လုပ်ခြင်း
Prospects များနှင့် Opportunity တွေကို လုပ်နိုင်ဖို့ CRM တိုင်းက CSV file ကို Upload လုပ်ပြီး Information တွေကိုထည့်ပြီးသိမ်းဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Import လုပ်မည့် Spreadsheet ထဲမှာပါရှိတဲ့ Column တစ်ခုစီတိုင်းရဲ့ Contact Property တွေက CRM ထဲမှာရှိတဲ့ Contact Property တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမှသာ Data အဟောင်းနဲ့အသစ်ကြား Match ဖြစ်မှာပါ။
(4) အခြားသောTools များနဲ့ CRM ကို Integrate လုပ်ခြင်း
Sales, Marketing and Customer Success တွေရဲ့ Informations တွက CRM ထဲမှာ Centralized ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲ့အတွက်ကြောင့် သင့်ရဲ့Customers နှင့် Prospects တွေရဲ့ Information တွေကို 360 မြင်နိုင်ပါတယ်။ အကယ် ၍ HubSpot CRM ထဲက Sales and Marketing ကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုပါစို့။ Lead တစ်ခုက Form ဖြည့်သွားတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် Sales Reps တစ်ယောက်နဲ့ Live Chat ကနေဆက်သွယ်တယ်၊ Websites ကိုဝင်ကြည့်သွားတယ်ဆိုရင်CRM ထဲမှာ Record လုပ်ထားပေးနိင်ပါတယ်။
(5) Dashboard တစ်ခုပြုလုပ်ခြင်း
Business တစ်ခုမှာ ကိုယ့် Team ရဲ့ Activity တွေ Performance တွေကို သေချာသုံးသပ်ပြီး Align လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ နည်းစနစ်ကျမှန်ကန်တဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေကို Coaching လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မို့ CRM dashboard က တွေအတွက်အရမ်းကို အသုံးဝင်ပါတယ်။ CRM Dashboard က သင့် ရဲ့လိုအပ်ချက်များနဲ့ကိုက်ညီအောင် Reports တွေ Create လုပ်လို့ရပါတယ်။
(6) Reports ဆောက်ခြင်း
Sales Manager တစ်ယောက်အနေနှင့် Data များကိုကြည့်ရှုဖို့ အချိန်များစွာကုန်ဆုံးနေရတယ်။ Sales Reps တွေကလည်း ကိုယ့် Product တွေကိုရောင်းနိုင်ဖို့ အချိန်များစွာယူရပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ် ဒါမှမဟုတ် သုံးလတစ်ကြိမ်ပို့နိုင်ဖို့ Email တွေ Create လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Sales Reps တွေ Email ပို့ခြင်း သို့မဟုတ် Replied Email များ Sales Reps များမှ ဖုန်းခေါဆိုမှုများ၊ Sales Reps များမှရရှိလာသော Projects များကိုလည်း Report ဆောက်ပြီး Dashboard ကနေ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
CRM နှင့် သင့် Business ကိုဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ
Gartner ရဲ့ report တခုမှာ ဒုဥက္ကဌ Joanne Correie မှ “CRM ဟာ လာမယ့်နှစ်တွေမှာ Digital လုပ်ငန်းစဉ်များရဲ့ Central ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းပညာဟာ ကုမ္ပဏီများကို ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကြားက ရပ်တည်ရှင်သန်နိုင်အောင် ဝင်ငွေများစွာ ဖန်တီးပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။” ဟုပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ခေတ်ရှေ့ပြေးတိုးတက်မှုကြောင့် ဆိုရမှာပါ။
ကုမ္ပဏီများဟာ အမြဲလိုလို လျင်လျင်မြန်မြန်တိုးတက်လာနေပါတယ်။ သူတို့အားလုံးဟာ Sales and Marketing အပိုင်းတွေမှာ အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်ထားကြတာကို တွေ့မြင်နိုင်မှာပါ။
Prospects and Customers အသစ်တွေထံ Social Channels များမှတဆင့် Video Marketing များအသုံးချပြီး Reach နဲ့ Engage များများရရှိနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းသစ်များ ရရှိလာကြပါတယ်။
ကုမ္ပဏီများတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာ ဈေးကွက်များကို Track လုပ်ခြင်း အစရှိတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြုလုပ်ဖို့နိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို Marketing Team ကဖြစ်စေ၊ Sales Team ကဖြစ်စေ ဒီသတင်းအချက်အလက်တွေအတွက် အချိန်ပေးပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မရှိကြပါဘူး။
CRM စနစ်ကို အသုံးမပြုတဲ့အခါ Marketing နဲ့ Sales မှ ဝန်ထမ်းများက Email များ ချိတ်ဆက်ခြင်း၊Customers များနဲ့ ချိတ်ဆက်ခြင်း အစရှိတဲ့ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ အချိန်ပိုကုန်ပြီး လူအင်အားကို ပိုမိုစိုက်ထုတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်ရတဲ့အခါ Appointment များလွဲချော်ခြင်း၊ တစ်နေရာထဲကို အကြိမ်ကြိမ် ချိတ်ဆက်မိခြင်း အစရှိတဲ့ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ မှားယွင်းမှုများ ကြုံတွေ့လာကြရခြင်း Sales Process တွေမှာ နှေးကွေးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။
CRM စနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် Complex Workflow တွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပြီး Sales Team ကိုလျင်လျင်မြန်မြန် တိုးတက်လာစေဖို့ ကူညီပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ CRM စနစ်က
– လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း
– လုပ်ငန်းအတွက် ဆောင်ရွက်ရမယ့် အချက်များကို အတိအကျ လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ခြင်း
– အလုပ်ချိန်အတွင်း ထိရောက်ပြီး လွယ်ကူချောမွေ့စေဖို့ ကူညီပေးနိုင်ခြင်း
– လုပ်ငန်းအတွက် မလိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်များကို ဖယ်ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း
အစရှိတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
CRM ဆိုတာ သင့်အတွက် Contact List တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ Manage လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Tools ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Tools ကနေသင့်ကိုလုပ်ပေးနိုင်တာတွေက Users ပေါင်းမြောက်များစွာထည့်နိုင်တဲ့အပြင် အခမဲ့သုံးနိုင်ပါတယ်။
(1) CRM ဟာ အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
Free ဖြစ်တဲ့အပြင် ဒီ CRM ကိုအသုံးပြုနိုင်တာက သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပဲ Marketing Team ရော Sales Team ရောအကုန်လုံးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
(2) Live Chat Feature ပါဝင်ပါတယ်။
Hubspot က Live Chat Tool Develop လုပ်ခဲ့ပြီး Free ဖြစ်ဖြစ် Paid ဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
Live Chat Tool ကို Paid အဖြစ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ Live Chat Feature ရရှိနိုင်ပြီး Live Chat နဲ့ Inquiries တွေကို အသေးစိတ် Customize လုပ်နိုင်မှာပါ။
(3) Insights တွေကိုပိုမိုအသေးစိတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
CRM က Customer တွေရဲ့ Interactions တွေကို Track လုပ်ပေးတဲ့အပြင် Insights တွေပြန်ထုတ်ပေးပြီးဘယ်အချိန်မှာ Follow up လုပ်ရမလဲဆိုတာ အလွယ်တကူသိနိုင်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်။ Gmail နဲ့ Outlook Extensions တွေရှိရင် Email တွေကို ဘယ်လောက်ဖွင့်ဖတ်သွားလဲဆိုတာပါ အသေးစိတ် Track လုပ်နိုင်မှာပါ။
(4) Customize စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်။
အခြားသော CRM တွေနဲ့မတူတာ‌ကတော့ HubSpot မှာသင့် Brand နဲ့ Sales Process တွေအတွက်ကြိုက်သလောက် Customize လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အခုလို နေရာတစ်ခုတည်းမှာ တူညီတဲ့ Data တွေစုထားတဲ့အတွက် Leads တွေကို Marketing ကနေ Sales Funnel တွေအထိ Data တွေကိုအလွယ်တကူထိန်းသိမ်းနိုင်မှာပါ။ CRM နဲ့ဆို သင့် data တွေကတစ်နေရာထဲမှာရှိနေမှာပါ။
ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေရှိနေပေမယ့် CRM Tools ကို Paid အဖြစ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ဈေးအနည်းငယ်ကြီးပါတယ်။
Free Apps တွေကိုသုံးတာက သင့်ကိုရေတိုမှာအဆင်ပြေစေမယ့် ရေရှည်မှာတော့ ဒုက္ခတွေ့စေမှာပါ။ CRM မှာပိုက်ဆံအသုံးပြုတာက သင့်ကိုပိုအကျိူးရှိစေပြီးသုံးစွဲရတဲ့ ငွေထက်ပိုသာတဲ့ Service ရရှိတယ်လို့ခံစားမိမှာပါ။
Business တစ်ခုဟာ Customer တွေရဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုကို မပေးစွမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင် အဲ့ဒီ လုပ်ငန်းဟာ ကျရှုံးနိုင်ပါတယ်။
အောင်မြင်နေတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် အသုံးစရိတ်ကို လျော့ချခြင်းထက် Customer များကို ဦးစားပေးဂရုစိုက်ခြင်းကို အလေးထားလုပ်ဆောင်နေတာကို တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် Customer များဟာ လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် အကောင်းဆုံး ရောင်းချပေးသူများဖြစ်လာတာကို လေ့လာချက်များအရ သိရှိရပါတယ်။
စစ်တမ်းများအရ Customer 77% ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ အတွေ့အကြုံများကို တဆင့်ပြန်လည် မျှဝေကြပါတယ်။
ဒီအချက်တွေအရ Customer ကိုစိတ်ကျေနပ်အောင် ဝန်ဆောင်ပေးနိုင်ပါက လုပ်ငန်းရေရှည်အောင်မြင်ကို ရရှိနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းများမှာ Customer အသစ်ရှာဖွေတဲ့အခါ အသုံးပြုရတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ဟာ Customer အဟောင်းများကို ထိန်းသိမ်းရတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ထက် ၅ဆမှ ၂၅ဆအထိ ပိုမိုကုန်ကျကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
CRM သုံးတဲ့အခါ ဘယ်လို မျိုးတွေ Develop လုပ်သွားဖို့လိုမလဲ?
(1) CRM အသုံးပြုခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို Define လုပ်ပါ။
ပထဦးဆုံးအနေနဲ့ သင့် Business တစ်ခုလုံးရဲ့ Overall Business Strategy တွေ Goals တွေကို Review ပြန်လုပ်ပါ…
သင့်လုပ်ငန်းအောင်ြမင်မှုမှာ CRM က ဘယ်အခန်းကဏ္ဍကနေ Support ပြုလုပ်ပေးနိုင်မလဲ?
CRM ကို အသုံးပြုပြီးတော့ ဘယ်လို ရလာဒ်မျိုးကို အလိုရှိတာလဲ?
အစရှိတဲ့ Vision တွေ၊ Objectives တွေကို အရင်သတ်မှတ်ဖို့ လိုပါမယ်…
ကိုယ့်ဝန်ဆောင်မှု၊ ကိုယ့်ထုတ်ကုန်ကို အသုံးပြုနေတဲ့ Customer တွေဆီကနေ ပိုကောင်းတဲ့ Feedback တွေကို လိုချင်တာမျိုးလား?
ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် Productivity and Efficiency ပိုကောင်းတဲ့ Team တစ်ခုကို လိုချင်တာမျိုးလား?
Customer အသစ်တွေ ထပ်ရချင်တာမျိုးလား?
သေချာစဉ်းစားပြီး CRM တစ်ခုအသုံးပြုခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုစဉ်းစားဖို့လိုပါမယ် …
CRM အသုံးပြုလိုက်တာနဲ့ သင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး ချက်ချင်းအောင်မြင်ပြီး အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ ယူဆထားလို့မရပါဘူး
သင့်လုပ်ငန်းမှာ ချမှတ်ထားတဲ့ Goals တွေနဲ့ သေချာ Alignment လုပ်ပြီး
သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ Business Strategy နဲ့ပါ Align လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်
(2) Customer Persona ကိုသေချာ Define လုပ်ပါ
သင့်လုပ်ငန်းအကြောင်း အသေးစိတ်ကို သင်ကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ ပိုမသိနိုင်ပါဘူး…
သင့် Customer တွေ အကြောင်းကိုရော?
အောင်မြင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းကြီးတွေအခြား Competitors တွေထက် ပိုသာရတဲ့ အဓိကအချက်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ Customers တွေအကြောင်း ကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ထားကြလို့ပါပဲ…
ကောင်းမွန်တဲ့ Customer Relationship တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့၊
Qualified ပိုဖြစ်တဲ့ Inquires တွေ Leads တွေ ဝင်လာဖို့၊
Consistent ဖြစ်တဲ့ ROI တစ်ခု ဖန်တီးနိုင်ဖို့၊
ဒါတွေ အားလုံးရဲ့ အဖြေက သင့် Customers တွေကို သင်ဘယ်လောက်နားလည်ထားသလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်နေတာပါ…
Customer Persona များ ဖန်တီးထားမယ်ဆိုရင် Customer Segmentation သေချာပြုလုပ်လာနိုင်ပြီး ပိုကောင်းတဲ့ Marketing Activities တွေ Sales Activities တွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်
Customer တွေရဲ့ Information တွေကို အသုံးပြုပြီး Ideal Customer Persona ကို ဖန်တီးထားလို့ရပါတယ်…
-သင့် Product/ Service ကို အသုံးပြုရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်
-သူတို့ ကြုံနေရတဲ့ Challenges တွေ
-ဘယ်အရာက သူတို့ကို Motivate ဖြစ်စေတာလဲ အသေးစိတ် စဉ်းစားပြီး ဖန်တီးဖို့လိုပါမယ်။
Buyer Persona တစ်ခုကို အသေးစိတ် ဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့ Step-by-Step Guide ကို
သင့် Company က B2B Company တစ်ခု ဖြစ်မယ်ဆိုရင် Target ထားမယ့် Companies တွေ Accounts တွေရဲ့ …Budget, Revenue, Company Size, Industry စသည်ဖြင့် Tier ခွဲများ သတ်မှတ်ပြီး Ideal Customer Profile များကို ဖန်တီးထားဖို့လိုပါမယ် ။
( 3) Buyer Journey ကို အသေးစိတ် Develop လုပ်ပါ
Buyer Journey ဆိုတာ သင့် Product/ Service ကို Customer တစ်ဦး စတင် သတိပြုမိရာကနေ အသုံးပြုသွားသည်အထိ အဆင့်ဆင့်ကို ဆိုလိုပါတယ်။
ဉပမာ – သင့်လုပ်ငန်းမှာ
Customer Data တွေ Organized မဖြစ်လို့ Reporting တွေ Analytics တွေလည်း မမှန်ဘူးဖြစ်နေတယ်
CRM အသုံးပြုရင် ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းလို့ရမယ်ယူဆတယ် (CRM အကြောင်းကို လေ့လာရင်း ဒီ Blog လေးကိုရောက်လာတယ်) ။ သေချာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီး CRM တစ်ခုကို စတင်အသုံးပြုလိုက်တယ်။
ဒီလို Awareness, Consideration, Decision Journey တစ်ခုလုံးမှာ ကိုယ့် Customer တစ်ဦးအနေနဲ့ ဘယ် Stage မှာဆို ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲ၊ ဘယ်လိုပြုမူမလဲ အသေးစိတ်စဉ်းစားရေးဆွဲရပါမယ်။
(Buyer Persona/ Journey တစ်ခု ရေးဆွဲဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေပါသလား?)
(4) Destination သတ်မှတ်ပါ
CRM ကို ထိထိရောက်ရောက်အသုံးချနိုင်ပြီး Business Goals တွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ CRM Strategy တစ်ခု Develop လုပ်တဲ့အချိန်မှာ အဆိုပါ Goals တွေကို SMART Goals များဖြစ်သည်အထိ အသေးစိတ်ချမှတ်သွားဖို့လိုပါမယ်။ Goals တွေ သတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Objectives တွေပြည့်ဖို့ ဘယ်လို Plan ချပြီးသွားမလဲ ပြင်ဆင်ရပါမယ်။
သင် ချမှတ်ထားတဲ့ Objective တစ်ခုစီတိုင်းရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ပြန်လည်တိုင်းတာပေးနိုင်မယ့် Success Metrics များကို Team Members များနှင့် Define လုပ်ပါ။ Overarching Goals တွေဆီ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Constraints တွေကြားထဲမှာ ပြည့်မှီနိုင်ရဲ့လား?
Revise ပြန်လုပ်ဖို့လိုမလား? စတဲ့ Checklists များနဲ့ အပတ်စဉ် Review လုပ်ပါ။
(5) Customer Tier Status များပြင်ဆင်ပြီး Priority ခွဲပါ
B2B Companies တွေအနေနဲ့ Customer တစ်ဉီးရဲ့ Deal Size, Lifetime Value (LTV) စတဲ့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအပေါ် Profitable ဖြစ်မှုအပေါ် မူတည်ပြီး Customer Tier များခွဲသွားဖို့ လိုပါတယ်။
Sales Cycle ကြာလေ့ရှိတဲ့ B2B Industry တွေမှာ Profitable ဖြစ်မှုအပေါ် အခြေခံပြီး Prioritize လုပ်သွားဖို့ ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ Customer တစ်ဦးရဲ့ Valuable ဖြစ်မှုကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ Priority ခွဲပြီး Customer Segmentation သေချာ ပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုရင် Target ထားထားတဲ့ Accounts တိုင်းကို Deal Close လုပ်နိုင်ဖို့လည်း ပိုသေချာလာပါလိမ့်မယ်။
(6) Team Members များနဲ့အတူ Strategy Development လုပ်ပါ
CRM ထဲမှာ များပြားတဲ့ Customer Data တွေ သိမ်းဆည်းထားရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး
ဒီ Data တွေကို အသုံးချပြီး Business တစ်ခုလုံးရဲ့ Goals တွေ ပြည့်မှီအောင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာက သင့် Team Members များ/ Employees များပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Strong ဖြစ်တဲ့ Sales Process တစ်ခု Develop လုပ်ဖို့ Strategy တစ်ခု Develop လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အဆင့်တိုင်းမှာ Team Members များနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ပါ။
ဒီလိုဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းက လုပ်ငန်းတွင်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ Goals တွေအပေါ်မှာ တူညီတဲ့ Vision နဲ့ Direction တစ်ခုကိုလည်း တည်ဆောက်နိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် CRM System ကို သင့်လုပ်ငန်းတွင်း Implement လုပ်တဲ့အခါ CRM System အသစ်ကို Deploy လုပ်တဲ့အခါမှာ ပိုမိုလွယ်ကူ လျင်မြန်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Team Members များနဲ့အတူ Strategy Development လုပ်ပါ ။
(7) CRM အတွင်းသို့ Activities များ အားလုံး Sync လုပ်ပါ
အရေးအကြီးဆုံးနဲ့ မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်ပါ…
Prospects ကနေ Customer ဖြစ်သည်အထိ Customer ကနေ Promoter တစ်ဦးဖြစ်သည်အထိ Customer Journey တစ်လျှောက် Interactions တိုင်း Activities တိုင်းကို CRM ထဲကို Sync လုပ်သွားဖို့လိုပါတယ်။
ဉပမာ – Appointments/ Meetings တွေ, ဖုန်းပြောခဲ့တဲ့ Records တွေကနေ Email Records တွေအထိ Sync လုပ်နေဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှ CRM တစ်ခုရဲ့ Full Ability ကို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးချနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို Process တစ်ခုလုံးကို အလိုအလျှောက် Sync လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ CRM တွေရှိပါတယ်။ သင့်လုပ်ငန်းနဲ့ သင့်တော်တဲ့ CRM တစ်ခုကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ?
-CRM Database ထဲကို Data အသစ်တွေ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ထည့်ဖို့အထိလွယ်ကူမြန်ဆန်ရဲ့လား
-CRM အတွင်းက Data တွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ Update ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရဲ့လား
-Sales Activities တွေကို အလိုအလျှောက် Log လုပ်ပေးနိုင်ရဲ့လား
-Sales Email တွေကို အချိန်တိုအတွင်း Optimize လုပ်နိုင်ရဲ့လား
-Prospects Behavior Tracking (Email Opens, Clicks) စတဲ့ Activities တွေကို Real-time အသိပေးနိုင်ရဲ့လား? ဒီလို Checklists တွေနဲ့ သေချာစီစစ်ပြီး ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
CRM က အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပုံတွေ
-CRM တစ်ခုကို Implement လုပ်တဲ့အခါ အဓိကကျတဲ့ အချက်တွေအနေနဲ့ လက်ရှိ Existing Customer Database ကို Migrate လုပ်ပါ (အခြား CRM System တစ်ခုက ဖြစ်စေ၊ Excel ကဲ့သို့ Spreadsheet များကဖြစ်စေ)
-Contacts, Companies, Deals စတဲ့ Data များကို Filtering ပြုလုပ်ပြီး Import လုပ်ပါ။
-Sales Team ကို Enablement ပြုလုပ်ပါ။
-High-Quality Leads များကို Prioritization/ Segmentation ပြုလုပ်ပါ။
CRM ကောင်းတစ်ခု ရွေးချယ်ပုံတွေ
CRM တစ်ခု Implement လုပ်တဲ့အခါ လုပ်ဆောင်ရမယ့်အဆင့်တွေ